Ny santionany ofisialy voalohany amin'ny fakantsary Pixel 2 dia eto | Androidsis
Araka ny nomarihinay lahatsoratra vao haingana, Ny Google Pixel 2 sy Pixel 2 XL vaovao dia nosatrohina ho toy ny finday miaraka amin'ny fakantsary faran'izay tsara eto an-tany. Ireo finday avo lenta ireo dia nandresy ny iPhone 8 Plus tamin'ny andrana notontosain'ny DxOMark, nahavita tamin'ny isa 98 avy amin'ny 100.
Na dia tsy misolo tena ny fahombiazan'ny fakantsary aza ny fitsapana DxOMark amin'ny tena fiainana, ny marina dia ireo santionany vaovao navoakan'i Google dia manamafy ny kalitaon'ny sary.
Fotoana fohy taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana ireo dia mpanao gazety marobe no namoaka ny sarin'izy ireo nalaina niaraka tamin'ireo terminal, saingy izao dia nanapa-kevitra ny hamoaka ny sarin'izy ireo i Google izay ahitanay ny sarin-tsary, horonan-tsary ary sary misy endrika maro samihafa sy ny toe-java-misy samihafa.
Raha misy tsy mahalala, ny Google Pixel 2 sy ny zokiny dia manana fakan-tsary 12.2 megapixel aoriana misy f / 1.8 aperture ary ny pixel miaraka amin'ny haben'ny 1.4μm. Nanapa-kevitra ny orinasa fa tsy hanatevin-daharana ny fironana ho an'ny finday avo lenta izay mampiditra fakan-tsary miverina aoriana, angamba satria nanandrana nanatsara ny sensor izay tao amin'ny taranaka teo aloha araka izay tratra.
Noho izany, manome ny Google Pixel 2 ihany koa Hitan'ny dingana Dual-Pixel ary autofocus tamin'ny laser. Misy ihany koa ny fanamafisana optika sy elektronika ho an'ny horonan-tsary ary tafiditra ao aza izy ireo sivana zava-misy virtoaly.
Afaka manao raketo horonantsary kalitao 1080p amin'ny frame 30, 60 ary 120 isan-tsegondra, fa koa amin'ny kalitaon'ny 720p hatramin'ny 240 FPS sy 4K amin'ny 30FPS. Misaotra ny Teknolojia HDR +, ny Pixel 2 dia mahatalanjona amin'ny toe-javatra maivana, toy ny hita amin'ny santionany ofisialin'ny orinasa.
Ny fakan-tsary eo alohan'ny Pixel 2 dia manana vahaolana 8 megapixels ary aperture f / 2.4. Na eo aza ny famahana ambany azy, ny sary dia toa tsara, na eo aza ny tsy fanatontosana ny halalin'ny saha hita ao amin'ny iPhone 8.
Avelanay miaraka amin'ireto santionany ireto ianao. Raha hijery ny galeriany feno dia aza misalasala mitsidika ny Pejy Google Photos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny santionany ofisialy voalohany amin'ny fakantsary Pixel 2 dia eto
Makà Xiaomi Mi6 amin'ny vidiny tsy mampino !!